साझा बन्दै सारंगी
सारंगीवादक श्याम नेपालीले औपचारिक रूपमा यो बाजा बजाउन थालेको २० वर्ष पुगिसकेको छ । उनी केही वर्षयता अमेरिका छन्, जहाँ गजलकार सुरेश वाग्ले लगायतसँग मिलेर ‘हिमालयन हेरिटेज कल्चरल एकेडेमी’ सुरु गरेका छन् ।
क्वाँटी अर्थात् तातो झोल
क्वाँटी अर्थात् तातो झोल । जनैपूर्णिमा अर्थात् गुन्हीपुन्हीको दिन नेवार समुदायमा विभिन्न थरीका नौ गेडागुडीको टुसा उमारी क्वाँटी पकाएर खाने चलन छ । सानो–ठूलो केराउ, मास, मुगी, मस्याङ, बोडी, भटमास, बकुल्ला, चनालगायत नौ थरीका गेडागुडी मिसाएर क्वाँटी बनाउने गरिन्छ ।
खबर हराएको चिठी
काठमाडौंबाट केही थान रंगकर्मी हराएका छन् । उनीहरू कहाँ छन्, के गर्दै छन् धेरैलाई अत्तोपत्तो छैन । केही दिनयता हराएका देशभरका १४ युवा निर्देशक यतिखेर पोखरामा भेटिन्छन् ।
गाईजात्रामा जे नभई हुन्न
मप्यारी नापित शोकमा छिन् । भक्तपुरको याछेँकी उनले गत साउन २१ मा ३८ वर्षेे भदा गुमाइन् । शोक मनाउने फुर्सद भने पाएकी छैनन् उनले । नजिकिँदै गरेको साँपारु अर्थात् गाईजात्रामा दिवंगत भदाको गाई बनाउन आवश्यक सामग्री जुटाउन उनी व्यस्त छिन् ।
सहरमा बंगलादेशी स्वर
बंगलादेशको राजशाही विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ शास्त्रीय गायक डा. असित रोय र डा. पदमनी दे अहिले नेपालमा छन् । उनीहरू यहाँका वाद्यवादकसँग मिलेर विभिन्न रागहरूको प्रस्तुति दिइरहेका छन् ।
चित्रकारहरूले नै किन्छन् चित्र
बिहान चियाको चुस्की लिँदै गर्दा होस् या दिनभरिको कामले गलेका बेला, कलाकार सौरगंगा दर्शनधारी जसै लिभिङ रुममा पुग्छिन्, उनको आधा थकान पर भाग्छ । भित्तामा राखिएका चित्रहरू भिन्नै आनन्द पाउँछिन् उनी । कालोपुल घर भएकी उनी थकान मेट्न लिभिङ रुममा घण्टाैं बिताउने गर्छिन् ।
महाभारतको सिङमाङ सोलुखुम्बुको फिफी
तामाङहरू महाभारत लेकलाई ‘म्हाबर’ भन्छन् । यही म्हाबरबाट बुधबार सिङमाङ, ठेकी, थारा (कपडा बुन्ने तान), डम्फूजस्ता पुराना बाजागाजासहितका सामग्री सहर ल्याइपुर्‍याइएको छ ।
एउटा सांगीतिक यात्रा
तपाईंको बसोबास भित्री काठमाडौंमा छ भने अचेल मीठो धूनसँगै बिहानीको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यो धुन साँच्चै कति मीठो हुन्छ भने यसले बिहानको समयलाई नै ताजा र फुर्तिलो बनाउने गर्छ ।
आफ्नाको हेला, विदेशीको चासो
अघिल्तिर फनफनी घुमिरहेको चक्रबाट उनले माटाको सानो पाला बनाइन् । अनि मुसुक्क हाँसिन् । बल्ल उनको चिनियाँ परिचय खुल्यो । भक्तपुरको पोट्री पार्कमा केही दिनयता २६ वर्षीया लिली माटाका भाँडा बनाउने कला सिक्दै छिन् ।
सम्झना वीर योद्धाहरूको
गुगलमा ‘वंशु गुरुङ’ नाम टाइप गर्दा थुप्रै वंशु भेटिन्छन् । त्यही लहरमा ब्ल्याक एन्ड हाइट पोट्रेटमा एउटा चित्र पनि देखिन्छ । ठिटौले अनुहारमा ।